Amin'ny 4 Desambra dia haseho ny Snapdragon 8150 | Androidsis
Ny Qualcomm's Snapdragon 4 dia haseho amin'ny 8150 Desambra
Ny SoC an'ny finday an'i Qualcomm no ivon'ireo finday avo lenta am-polony izay avoaka isan-taona. Ilay chipmaker monina any Etazonia dia manana laza matanjaka amin'ny famokarana CPU malaza indrindra miaraka amin'ny GPU sy modem azo antoka. Izany no antony samy manantena ny handimby ny Snapdragon 845 SoC ankehitriny ny rehetra.
Na dia somary somary somary kely aza i Qualcomm tamin'ity taona ity, dia misy tatitra iray milaza fa azo inoana izany afaka nahita ilay chipset 7nm voalohany an'ny orinasa izahay tamin'ny 4 Desambra. Amin'izany andro izany dia hanao hetsika ny orinasa amin'ny Fihaonambe Teknolojia Qualcomm ary ny mpikambana ao amin'ny gazety sinoa dia nahazo fanasana miaraka amin'ny fanambarana milaza izao manaraka izao: "Sahia ho traikefa finday 5G voalohany."
Hetsika 3 andro no hatao any Hawaii, ary ny fanasana dia misy koa fitaovana Xiaomi VR miaraka amin'ny Qualcomm Snapdragon 821.
Raha ny momba ny masontsivana an'ny Snapdragon 8150, ny resaka ankehitriny dia izany antenaina ho tonga miaraka amina tri-cluster CPU core design, mitovy amin'ny Kirin 980. Ilay chipset voalaza vao tsy ela akory izay no hita tao AnTuTu ary nahazo isa ambony indrindra 362,292 tsy hita amin'ny fitaovana Android hafa izany. Ny CPU hafa tokana afaka manakaiky dia ny Huawei's Kirin 980, izay nahazo isa 311,840 tao amin'ny refy. Ity isa ity dia arahin'ilay Snapdragon 845 ao amin'ny Black Shark Helo, izay isa 301,757. (Jereo: Ireo telefaona matanjaka 10 mahery tamin'ny oktobra 2018, raha ny filazan'ny AnTuTu Benchmark).
Ny maritrano fototra andrasana dia toy izao manaraka izao: hisy fotony lehibe iray atomboka amin'ny 2,84 GHz, intelo afovoany intelo miakatra amin'ny 2,4 GHz, ary farany ny intes kely efatra mahomby dia mahatratra 1,78 GHz. Ny GPU ao anatiny dia inoana fa ny Adreno 640, izay 20 isan-jato tsara kokoa noho ny teo aloha, ny Adreno 630 an'ny SD845.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Qualcomm's Snapdragon 4 dia haseho amin'ny 8150 Desambra
Ahoana ny fametrahana pirinty tsy misy tariby sy pirinty pirinty amin'ny Android
Ahoana ny fizarana ny efijery lalao ataonao amin'ny namana amin'ny PlayJ, ilay fampiharana Sony vaovao